Zvinhu zvedu zvetsika zvakadhindwa zvinhu zvinotumirwa pamwe EMS TAURA!
Q: Ndezvipi Iyo Inofungidzirwa Kusvitsa Nguva Pane Ordhi Yangu?
US, UK, CA, AUS Nguva yekutora Inofungidzirwa: 12-25 Mazuva (EMS NaKutya Kutsvaga)
Nguva yekutora Inofungidzirwa: Mazuva gumi nemana kusvika gumi nemana (DHL Nekwenzvimbo Yekutevera)
Nguva yekutora Inofungidzirwa: 10-14 Mazuva (DHL Nekwenzvimbo Yekutevera)
US, UK, CA, AUS Nguva yekutora Inofungidzirwa: 10-25 Mazuva (EMS Nenharaunda Yekutevera)
chero Shangu mirairo iyo isina kusvika mukati memazuva makumi mana nemashanu ekugadziriswa kwemaodha inokodzera kudzoreredzwa kana kuregererwa kwemahara.
Q: Ndizogamuchira riini Ruzivo Yekutevera Pane Yangu Order (s)?
Kune maAmerican ekuteedzera nhamba yekutevera inogona kutora kusvika kumazuva manomwe mushure mekurairwa kwakaitwa kwekutsvaga iyo data kuratidza. Ita shuwa kuti urikushandisa iyo yekutarisisa webhusaiti iyo iri www.qtrack.net/en.
Nezve nyika dzakawanda kudaira nhamba dzekutora dzinogona kutora kusvika pamazuva gumi mushure mekudaira kwemaitiro ekutsvaga dhata kuratidza.Ive nechokwadi chekuti urikushandisa webhusaiti yekutsvaga iyo inova iyo www.qtrack.net/en. Izwa kurairwa, epasi rose maodha haadzoreki kana angotumirwa uye haizoratidze dhata rekuendesa kwariri
Tinoshanda pane ALL kutengesa ndiyo yekupedzisira mutemo. Izvi zvinoreva kuti haugone kudzima, kudzoka, kana kugamuchira mari yekudzoreredza kana ikasava yekupedzisira pane yedu.
Q: Handisi kufara Nezvangu saizi Uye Kukodzera. Ndoita sei?
A: Ndokumbira Email kwatiri support@thekdom.com uye tizivise kuti dambudziko nderei! Isu tichashanda newe kugadzirisa nyaya yacho. Ndokumbirawo rangarira, aya itsika dzakadhindwa mashati, akagadzirwa kurongeka. Kana zvadhindwa, hatigone kuadhinda kana kuadzosera kuchitoro. Nekudaro, isu tichaedza kushandira chimwe chinhu kuti tizive kuti iwe wagutsikana nekutenga kwako!
Q: Wakaita Chikanganiso pane Yangu Order. Chii Chidimbu?
A: Tine urombo kwazvo. Izvo hazviitike kazhinji, asi hapana akakwana. Email support@thekdom.com uye isu tichashanda newe kuti tigadzirise. Kazhinji, izvi zvinongoda kuti utitumire mufananidzo wekukanganisa kwatakaita kuti tikwanise ku) revera chako uye b) kukufonera kuti ugadzirise.
Tine assortment yakakura yezvigadzirwa zvisina kuiswa mukati imba. Nekudaro, kana iwe uchiraira zvinhu zvakawanda panguva, zvinogona kutumirwa zvakasiyana saka zvinosvika kwauri nekukurumidza. Unogona kugamuchira chinhu chimwe pamberi pechinotevera, saka ndapota usatya kana ukasagamuchira zvese zvako zvinhu kamwechete, ingo rangarira kuti ivo vari munzira!